Tele Sale | Super Rich Man Company Limited ﻿
15.9.2019, Full time , Construction / Building
Company: Super Rich Man Company Limited
•	ရေကူးကန်သုံးပစ္စည်းများနှင့် Safety ပစ္စည်းများရောင်းချရန်။
•	Customer များအပေါ် စိတ်ရှည် ၊ သည်းခံတတ်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	Tele Sale လုပ်ငန်းကို စိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။
Work location South Horse Race Course,Tamwe,Yangon.
164 Days, Full time , Construction / Building
•	ရေကူးကန်သုံးပစ္စည်းများနှင့် Composit & Safety ပစ္စည်းများရောင်းချရန်။ •	Marketing လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရမည်။
We provide meal.
We are top swimming pool construction company in Myanmar. We provide one stop swimming pool services among nation wide.
•	Construction Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်။ •	စာရင်းများစစ်ရန်။
•	Construction Site များတွင်စစ်ဆေးရန်။ •	အလုပ်ကို စေ့စပ်သေချာစွာလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ရေကူးကန်သုံးပစ္စည်းများနှင့် Safety ပစ္စည်းများရောင်းချရန်။ •	စကားပြောပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။
•	Super Rich Man Swimming Pool Construction Co.,Ltd တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်။ •	အသက်(40)နှစ်အထက်ဖြစ့်၇မည်။
•	Construction Co.,Ltd တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ •	အရက်သေစာကင်ရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
•	လျှောက်ထားသူသည် ရုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အသက်(40)နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။
•	အင်္ဂလိပ်စာ ရေးနိုင်ဖတ်နိုင်ပြီးဘာသာပြန်ကျွမ်းကျင်ရမည်။ •	Email လဲကျွမ်းကျင်ရမည်။
•	တက္ကသိုလ်တခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ •	Construction Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
•	အသက် ၂၀ နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည် •	သွက်လက်၍ လုပ်ငန်းကိုစိတ်ပါဝင်စားသူ၊ ဆက် ဆံရေးပြေပြစ်သူ၊ အသင်းအဖွဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
Quality Survey Engineer
•	ရေကူးကန်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ •	Estimate များတွက်ချက်နိုင်ရမည်။ •	Autocad 2D, 3D ရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ •	QS နှင့် BQ တွက်ချက်နိုင်ရမည်။ •	Team Work ဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
•	English4Skills ကျွမ်းကျင်ရမည်။ •	MYOB Software ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	မိမိလက်အောက်ဝန်ထမ်းများအား ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	အသက် ၂၅ နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ •	သွက်လက်၍ လုပ်ငန်းကိုစိတ်ပါဝင်စားသူ၊ ဆက် ဆံရေးပြေပြစ်သူ၊ အသင်းအဖွဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
•	Good personality, communication and negotiation skill. •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	အသက် ၂၅ နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည် •	သွက်လက်၍ လုပ်ငန်းကိုစိတ်ပါဝင်စားသူ၊ ဆက် ဆံရေးပြေပြစ်သူ၊ အသင်းအဖွဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
- မိမိအရည်အချင်းပေါ်မူတည်၍လစာညှိနှိုင်း ပေးမည်။ - အဖွဲ့အစည်း နဲ့ လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
- မိမိအရည်အချင်းပေါ်မူတည်ပြီးလစာညှိနှိုင်း မည်။ -Sale and Marketing Certificate or Diploma ရှိသူကိုဦးစားပေးမည်။
QS Senior Engineer
- မိမိအရည်အချင်းပေါ်မူတည်၍လစာညှိနှိုင်း မည်။ -Quantity Surveyour (QS) Diploma or Degree ရှိသူကိုဦးစားပေးမည်။
- မိမိအရည်အချင်းပေါ်မူတည်၍လစာညှိနှိုင်း မည်။ -Human Resources Management (HR) Diploma (သို့)ီDegree ရှိသူကိုဦးစားပေးမည်။
Tele Sale Sale & Marketing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Super Rich Man Company Limited Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Construction / Building Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Work in Yangon (Rangoon)(10799)
Work in Yangon Region(2415)
Dagon Glory Co., Ltd.(1011)
Three Swallows Construction Co., Ltd
SDA Global Engineering Co.,Ltd
Hafary Myanmar - Leading Surfacing Materials